ဗေဒင် Archives - Newposts
23.6.2022 မှ 29.6.2022 အထိ ၇ ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
23.6.2022 မှ 29.6.2022 အထိ ၇ ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီအပတ်ထဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိလုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေ၊ ပရောဂျက်တွေဆီကနေတဆင့်ငွေရလာပါ လိမ့်မယ်။ လူငယ်များ မိဘတွေဆီက မုန့်ဖိုးများစွာရရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကာလအတွင်း တာဝန်ပေးအပ်လာသော အလုပ်တွေကို မညီးမညူဘဲ လုပ်ကြည့်ပါ။ ထူးခြားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေရလာပါလိမ့်မယ်။ အင်တာဗျူးထားသော သူများ၊ […]
၇ရကျသားသမီးများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၂ ဇွန်လ (၂၁) ရက်မှ (၃၀) ရက်အတွင်းအရေးကြုံလျှင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ယတြာလက်ဆောင်များ
ယတွာလကျဆောငျ မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ ၂၀၂၂ ဇှနျလ (၂၁) ရကျမှ (၃၀) ရကျအတှငျး အရေးကွုံလြှငျအသုံးပွုနိုငျရနျအတှကျ ယတွာလကျဆောငျမြား မိတျဆှမြေားနှငျ့တကှ တဈမိသားစုလုံး စိတျညဈစရာ ၊ စိတျပူစရာ ၊ စိတျသောကရောကျစရာ အခကျအခဲအကွပျအတညျးမြားမှ အမွနျဆုံးလှတျမွောကျပွီး ကောငျးသော အကွံအစညျရညျရှယျမြား အမွနျဆုံး ပွညျ့မွောကျအောငျမွငျကွပါစေ …။ မိတျဆှတေို့၏ကောငျးကြိုးမြားကို […]
ကိုယျ့ရဲ့ လက်ခဏာမှာ M ပုံစံ ပါတယျဆိုရငျ….
ဒီတစ်ခါမှာတော့ လက္ခဏာမှာ ပါတဲ့ လက္ခဏာလမ်းကြောင်းတွေကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော် ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဖဝါးမှာ M ပုံစံပါလာခဲ့ရင် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အခြေအနေ စိတ်နေသဘောထားက ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ရအောင် M ပုံစံ ပါတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ လက္ခဏာမှာ M ပုံစံ ပါတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ […]
၇ ရက် သားသမီးများအတွက် (၁၉. ၆ .၂၀၂၂) မှ (၂၅. ၆ .၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
၇ ရက် သားသမီးများအတွက် (၁၉. ၆ .၂၀၂၂) မှ (၂၅. ၆ .၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၇ ရက် သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်အတွင်း ကံကြမ္မာနှင့် ဆောင်ရန် ၊ရှောင်ရန် ယတြာများကို သိရှိနိုင်ဖို့ အခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ၇ ရက် […]
ဗေဒင်လက္ခဏာ ဆရာကြီးတစ်ဦး ပြောပြတဲ့ သူဌေးဖြစ်မယ့်သူရဲ့ လက်ပုံစံ လူအများစုသည် လက်ဝါးပြတ်ဆိုလျင်အင်မတန်ကြောက် အင်မတန်ရှောင်ကြ၏။ဘယ်လောက်ထိကြုံခဲ့ဖူးလဲဆိုရင်…သူ့သမီးနှင့်ယူမည့်လူ အားလုံးခေါင်းငြိမ့်သဘောတူပြီးမှ လက်ဝါးပြတ်ဖြစ်နေ၍ခါးခါးသီးသီးငြင်းလိုက်တာမျိုးလက္ခဏာ ဗေဒင်ဟောသက် ၂၂ နှစ်ကျော်အတွင်း သုံးလေးဦးကြုံဖူးပါသည်။ယခုလက္ခဏာရှင်သည် လက်ဝါးပြတ်ဖြစ်၏။ပထမအရွယ်မကုန်သေးအသက်ငယ်သေး၏။သို့သော်ချမ်းသာ၏။ပြီးခဲ့တဲ့သုံးလေးရက်ကဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောဖို့အလှည့်ရောက်၏။မန္တလေးမြို့ကြီးကဖြစ်၏။ (၁) အနီရောင်ဖြင့်ပြထားသော လက်ဝါးပြတ်ဖြစ်နေသော်လည်း လက်မသည်လက်မတင်းပုတ် ပုတိုတိုလက်မမျိုးမဟုတ်သောကြောင့် လက်ဝါးပြတ်ဟုမသတ်မှတ်ပါ။ (၂) ထိုလက်ဝါးပြတ်သည် အနက်ရောင်ဖြင့် ဆွဲပြထားသောစိန်သရဖူအကြီးစားဖြင့် […]
16.Jun.2022 မှ 22 .Jun. 2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
16.Jun.2022 မှ 22 .Jun. 2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ရှုပ်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိသားစုကိစ္စ ၊အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ စိတ်ရှုပ် စရာတွေပေါ်လာတတ်တာတွေ့ရပါတယ်။ ငွေကြေးဥစ္စာများအမိအဘကျန်းမာရေးအတွက် သုံးစွဲရတတ်ပါ တယ်။ အလုပ်တူ၊ စိတ်ကူးတူတဲ့ သူတွေနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲစရာကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက ဥပဒေနဲ့ […]
စနေ သားသမီးများ အတွက် တသက်စာ ကံကောင်းစေပြီး အညံ့တွေ ကျော်သွားမယ့် အဆောင်
June 13, 2022 newposts2021 0
စနေသားသမီးများအတွက် တသက္စာ အသက်ကာလအရ အချိန်ကာလ တိက်စြာ ပြုလုပ်၍ လက်တွေ့ အကျိုးထူးစေမည့် နည်းလမ်း စနေဂြိုလ် သက်ရောက်ကာလများဖြစ်သော အသက် (၁ ၉ ၁၇ ၂၅ ၃၃. ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃ ၈၁ ၈၉ ၉၇ […]
၇ ရက် သားသမီးများအတွက် (၁၂. ၆ .၂၀၂၂) မှ (၁၈. ၆ .၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
June 12, 2022 newposts2021 0
၇ ရက် သားသမီးများအတွက် (၁၂. ၆ .၂၀၂၂) မှ (၁၈. ၆ .၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၇ ရက် သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်အတွင်း ကံကြမ္မာနှင့် ဆောင်ရန် ၊ရှောင်ရန် ယတြာများကို သိရှိနိုင်ဖို့ အခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ၇ ရက် […]
9.Jun.2022 မှ 15.Jun.2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
9.Jun.2022 မှ 15.Jun.2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှု့ကလက်တကမ်း မှာရှိနေတယ်။ သင်မလုပ်လျှင် အရာရာသူတပါး ဦးသွား မည်။ရည်ရွယ်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှ အောင်မြင်မည် အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်ရှုပ်ရ မည် အိမ်ထောင်ဘက်၍ ဆွေမျိုးတွေဒုက္ခပေးတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ် လုပ်ငန်းသစ်တခုလဲစဖြစ် မည်။ နေရာသစ်တစ်ခုလည်းရောက်မည် အလုပ်ပြောင်းလဲ […]
ကလေး လူကြီး လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့အရာတွေပါ။ “လူ့ဘဝမှာ စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ စီးပွားလာဘ်လာတွေ ပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့အိမ်ဟာ သီရိမင်္ဂလာမရှိတော့ပါဘူး။ အမင်္ဂလာအိမ်ပဲ ဖြစ်တော့မယ်။ဒီတော့ ဒါတွေရှောင်ပါ – ရဟန်းသံဃာတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ကျောင်းပစ္စည်းများကို အိမ်သို့ယူဆောင်အသုံးမပြုရပါ။ ဥပုဒ်နေ့တွင်ခေါင်းမလျှော်ရပါ။ ဘုရားညောင်ရေအိုး အရေအတွက်ကို စုံဂဏန်းမထားကောင်းပါ။လင်ယောက်ျား၏လက်ယာဘက်၌ ဇနီးသည်ကိုမအိပ်စေရပါ။ မိမိထက် […]